Maalinta: Diseembar 5, 2018
Mid ka mid ah mashruucyada gaadiid ee muhiimka ah, oo ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, ayaa laga dhisayaa Isweydaarsiga Iskuxirka Magaalada Karamürsel. Cabbirka mitirka 19 290 mitirka qaybta xiran [More ...]
Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee Caalamiga ah (UTİKAD), 36. Shirka Golaha Guud ee Doorashada 29 waxaa lagu qabtay Noofembar 2018 gudaha Istanbul Crowne Plaza Hotel Florya iyadoo ay si weyn uga soo qeybgaleen. Doorashooyinka ayaa lagu qabtay Golaha guud [More ...]
Shaqaalaha Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) oo ka mid ah shaqaalaha Agaasinka Guud ee dallacsiinta qandaraaska ayaa la soo gabagabeeyey. Guddiyada Qandaraaska Kuxigeenka Maareeyaha Guud ee DHMİ Mehmet Karakan, Madaxa Sarkaalka Maaliyadda Muhsin Karakurt, Sarkaalka Gaadiidka-Sarkaalka Guud [More ...]
3. Last 1 ee dhismaha garoonka diyaaradaha 22 Dhimashada Cusub ee Cusub
Guddoomiye ku xigeenka CHP Gamze Akkuş İlgezdi, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, 6 Bishii Nofembar, Guddiga Qorsheynta iyo Miisaaniyadda ee baarlamaanka ee dhismaha garoonka diyaaradaha ee shaqaalaha 30 ayaa ku dhintay maddaarka, dib u xasuustii CIMER [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan wuxuu sheegay in warbixinta Golaha Garoomada Diyaaradaha Yurub ee dabooley muddadii 2008-2018 uu ahaa mid ka tarjumaya oo ka dhashay sheekada guusha ee la qoray muddadii dowladihii duulista rayidka ee Turkiga. [More ...]
Wax walba oo ku saabsan Barashada Express
Wax kasta oo ku saabsan Bari Express: Eastern Express ayaa shaqeynayay sanado. Marka muxuu si lama filaan ah ugu caan noqday, oo tigidhadii si dhakhso leh u dhammaadeen? East Express [More ...]
Yavuz: Imiz Samsun-Sarp Tareenka wuxuu ku jiraa ajandaha gobolka Val
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (OTSO) Sydar Yavuz oo ka qeyb galay Shirka Golaha, ayaa weydiiyay su’aal ku saabsan wadada tareenka; “Wadada tareenka ee Samsun-Sarp waxay ku jirtaa ajendaha qarankeena. Mashruucan waxaa laga wada hadlayaa oo laga wada hadlayaa Ankara ”. DHIBAATOOYINKA [More ...]
wadooyinka ugu quruxda Turkey ee tareenka
Sanadihii ugu dambeeyay, waxaan la seexanay East Express. Laakiin maahan safarka tareenka kaliya ee aad sameyn karto adoo ku raaxaysanaya qurxinta wadanka. Halkan waxa ku jira marinnada ugu quruxda badan tareenka ee Turkey ... xaaladaha jiilaalka inta badan gobolada our [More ...]
16 Billion Lacagaha TCDD ee Dhunkashada Nolosha
Soo jeedinta sharciga 'boorsada', oo ay kujirto qawaaniinta la xiriira dhaqaalaha, waxay saadaalineysaa isbedelo muhiim ah oo ku saabsan mowduucyo badan oo isugu jira mega mashaariicda ilaa SOEs, Iller Bank ilaa degmooyinka. [More ...]
EBB Qaadashada Casharada Laga soo bilaabo Sawirada A Caddeynta Wadada Wadada ee Socda
Suleyman BAKAL, Gudoomiyaha Ururka Taageerada Macaamiisha ee qiimeynaya sawirka eeyaha qaladka ku socdaalaya taraamka ee Eskişehir “Eskişehir Metropolitan Municipal (EBB) waa inay casharo ka qaadataa eeyaha dhumay ee ku safraya taraamka. Furitaanka hoyga xoolaha; nin [More ...]
CIMER: Shaqaalaha 5 oo ku dhintay dhismaha garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Isaga oo ka jawaabaya su’aasha ku-xigeenka CHP Ali Şeker ee ku saabsan inta shaqaale ah ee naftooda ku waayey dhismaha gegada diyaaradaha ee Istanbul, Xarunta Xiriirka Madaxweynaha (CİMER) ayaa yidhi, [More ...]
RayHaber 05.12.2018 Warbixinta Shirka
Adeegga Nadiifinta ayaa la qaadi doonaa Adeegga Shaqaalaha waxaa laga qaadi doonaa Nidaamka Hillaaca Waxaa la Dhisi doonaa (TÜDEMSAŞ) Shidaalka Waxaa Lagu Iibsan Doonaa Nidaamka Dabka Saaminta Nidaamka Dembiilaha Waa La Dhisi doonaa (20.12.2018 Taariikh Dib Loo Dhajiyay)
Shirka qorshaynta waxaa lagu qabtay Erciyes kahor xilliga qaboobaha. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada iyo waliba maareeyayaasha hayadaha dowliga ah ee ay khusayso. Erciyes Inc. Gudoomiyaha iyo Maareeyaha Guud Murat Cahid Cıngı ee Erciyes [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, Gebze bazaraas iyada oo qaadaysa tallaabo muhiim ah si loo baabi'iyo dhibaatada baarkinka ee aagga baabuurta la dhigto ayaa la gaarsiiyey. 7 oo ku taal Wadada Kızılay ee ku taal magaalada weyn, nawaaxiga Gebze [More ...]